संगठनको काम भद्रगोल, किन सेलायो नेकपाको एकता प्रक्रिया ? - Everest Dainik - News from Nepal
संगठनको काम भद्रगोल, किन सेलायो नेकपाको एकता प्रक्रिया ?
काठमाडौं, सत्तारुढ नेकपाका युवा नेताले पार्टी बैठक अनिश्चित बन्दै गएपछि शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन थालेका छन्। नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय स्थायी समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ।
स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकर, योगेश भट्टराई, पौडेललगायत नेता संगठित रूपमै दबाब अभियानमा लागेका छन्। उनीहरूले सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, श्रममन्त्रीसमेत रहेका गोकर्ण विष्ट, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेतासँग पनि शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउने विषयमा औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन्।
याे पनि पढ्नुस सत्तारूढ दल नेकपाकाे वैधानिकता सदर
‘हिजो एकता प्रक्रियाको साहसिक निर्णय लिने हाम्रा नेता पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, तर आज उहाँहरूले नै भूमिका लिएको एकता प्रक्रियामा किन ढिला भइरहेछ रु यसलाई छिटो टुंग्याउन पर्‍यो भनेर हामीले आफ्नो ठाँउबाट पहलकदमी बढाउन थालेका हौं’, पौडेलले भने। एक सातायता उनीहरूले पार्टीभित्र शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन संगठित अभियान थालेका हुन्।
याे पनि पढ्नुस जिल्लामा धमाधम एकताले केन्द्रमा दबाब, देशैभरी नयाँ ध्रुवीकरण
‘अझै एक÷दुई दिन लाग्छ होला, कार्यदलले काम सकेको छैन’, गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले भने। कार्यदल सदस्यले प्रदेश पदाधिकारीसँग एक चरण छलफल गरी अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने प्रयासमा छ। तिहार बिदामा प्रस्ताव बनाइसक्ने र तिहार सकिएलगत्तै सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने कार्ययोजना नेकपाको थियो।
विधानतः तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने नेकपा स्थायी समिति बैठक एकतापछि गम्भीर छलफल गर्न अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। २ असारमा सामान्य परिचयात्मक र २१ असारमा छोटो अवधिका लागि स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। पार्टी एकताको पूर्णता र सरकारको समीक्षा गर्न तत्काल अर्को बैठक बोलाउनेबारे छलफल भए पनि त्यसयता समिति बैठक बस्न सकेको छैन। भदौ ८ र ९, भदौ १९ र २०, भदौ २६ र २७, कात्तिक ४ र ५ हुँदै कात्तिक १२ र १३ मा बैठक डाकिएको थियो। तर यी कुनै दिन पनि बैठक बस्न सकेन। तिहारअघि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे पछि अर्को मिति तोकिएको छैन। ‘अब यो महिना बैठक बस्ने सम्भावना देखिँदैन’, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए।
नेकपाभित्र पार्टी एकता र सरकारको कामको समीक्षा मात्र नभएको होइन, एकतापछिको पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत उसले प्रकाशित गर्न सकेको छैन। आन्तरिक राजनीतिक कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन छाप्ने भनेको ३ महिना भए पनि छापिएको छैन। पार्टी एकताको ६ महिनाभित्र पार्टी सदस्यको अभिलेख राख्ने विधानको व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छ निश्चित छैन। उसले ६ महिनाभित्र संगठित सदस्यको अभिलेख एकीकृत गरी सदस्यता नम्बर निर्धारण गर्ने व्यवस्था विधानमै गरेको थियो।